निरुता सिंह, रेजिना उप्रेतीदेखि नन्दिता केसीसम्म कहाँ के गर्दै छन् यी हिरोइन ? – Etajakhabar
निरुता सिंह, रेजिना उप्रेतीदेखि नन्दिता केसीसम्म कहाँ के गर्दै छन् यी हिरोइन ?
काठमाडौं- कतिले आफ्नो अभिनय कलाका कारण दर्शकमाझ नाम पाए भने केहीले अंगप्रदर्शन, चुम्बन तथा बेडसिनजस्ता खुलापनका कारण क्षणिक चर्चा कमाए । तर, कालान्तरमा उनीहरूलाई न निर्माता, निर्देशकले सम्झिए, न त दर्शकले नै । एक समय फिल्म उद्योगमा चर्चा कमाएका कतिपय हिरोइन अहिले ओझेल परेका छन् । कतिले आफ्नो अभिनय कला, सुन्दरताका कारण दर्शकमाझ नाम पाए भने केहीले अंगप्रदर्शन, चुम्बन तथा बेडसिनजस्ता खुलापनका कारण क्षणिक चर्चा कमाए । तर, कालान्तरमा उनीहरूलाई न निर्माता, निर्देशकले सम्झिए, न त दर्शकले नै । तीमध्ये केही हिरोइन गृहस्थ जीवन व्यतीत गरिरहेछन्, केही अमेरिकातिर लागे त कोही अझै पनि ‘स्ट्रगल’मै छन् ।
एक समय निरुता सिंह निकै चर्चित थिइन् । तुलसी घिमिरेको ‘दक्षिणा’ र ‘दर्पणछाया’ फिल्मबाट हिरोइनका रूपमा स्थापित भएकी निरुतालाई शिव रेग्मीका ‘आफन्त’, ‘आफ्नो मान्छे’लगायतका फिल्मले ‘भर्सटाइल एक्ट्रेस’ भनेर चिनायो । निरुताले थुप्रै हिट फिल्म दिइन् । तर, अपशोच ! उनको लोकप्रियता धेरै समय टिक्न सकेन । आफू अभिनीत फिल्म फ्लप हुँदै गएपछि उनले मुम्बईको बाटो रोजिन् । बलिउडमा जम्ने योजना बुनेकी उनले अचेल मुम्बईमा इन्टेरियर डिजाइनिङको काम गर्ने गरेको बताइन्छ । खानदान फिल्मबाट ठूलो पर्दामा देखिएकी रेजिना उप्रेतीले ६ दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिन् । ‘वरदान’ नामक फिल्म पनि निर्माण गरिन् । वरदानले नाफा नदिएपछि उनले घरजमको बाटो रोजिन् । प्रेमी सुरज अधिकारीसँग तीन वर्षअघि बिहे गरेकी रेजिना एक पुत्रीकी आमा बनिसकेकी छिन् । अचेल उनी छोरीको हेरचाहमै व्यस्त छिन् । अभिनयमा फर्कने उनको चाहना भने अझै देखिन्छ ।
‘मन्जरी’ फिल्मबाट हिरोइका रूपमा डेब्यु गरेकी सुजाता कोइराला पछि ‘फिटकिरी’ फिल्ममा कोरस भूमिकामा देखापरिन् । त्यसपछि उनलाई दर्शकले फेरि पर्दामा हेर्न पाएका छैनन् । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ०१, २०७४ समय: ७:२७:५४